झापामा आफ्नै भाइको श्रीमती संग दाइलाई रं,गेहात भेटियो, दाजु भाइको पर्यो चर्काचर्की, हरे अब के होला ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
झापामा आफ्नै भाइको श्रीमती संग दाइलाई रं,गेहात भेटियो, दाजु भाइको पर्यो चर्काचर्की, हरे अब के होला ? (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki April 16, 2021
झापा । नेपालमा आजकल ह’रेक दिन नराम्रा खबरहरु एकपछि अर्को गर्दै आइरहेका छन । कहिले ह त्या कहिले आ त्म ह त्या कहिले चोरी त कहिले लुटपाट । संकटकाल सकिएपछि शान्त बनेको नेपालमा कहिलेकाही नसो’चेको घ’टना सुन्नु पर्दा सबै नेपालीहरुलाई दुखी बना’उदै आएको छ । झा’पामा फेरि अर्को सोच्नै नसकिने घिनलाग्दो घ’टना घटेको छ । श्रीमान १५ दिन कतै काम गर्न जादा एक परिवारमा जेठाजुले बुहारी भगाएका छन्।
धर्म चाहार नाम गरेका पिडित युवा मिडियामा आएर आफ्नो श्रीमती दाइले भगाएको भन्दै आफ्नो गुनासो पोखेका छन् । बलात्कार गरेको आरोपमा ८ बर्ष जेल बसे’र आए’का माइला दाजुले आफ्नी श्रीमती लिएर १४ दिन अगाडी बाट बेपत्ता भएको जनाएका छन् । उनले प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिए’का छन् तर अहिले सम्म उनकी श्रीमती र दाइ फेला नपरेपछि उनि मिडियामा आएका हुन् । अचानक दाजु र श्रीमतीको फोन आयेपचिओ पर्यो चर्काचर्की ।